अष्ट्रेलियाले उच्च सतकता अपनाएको छ, नेपाली सुरक्षित छौः पौडेल - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २४ चैत्र २०७६, सोमबार ०५:१६ |
कोरोना संक्रमणका कारण बिश्वका बिभिन्न देशहरु प्रभाबित भएका छन् । यसमा नेपाल पनि अछुतो रहेन । यो संगै नेपालीहरु रहेको बिभिन्न मुलुक पनि अछुतो रहन सकेनन् ।अष्ट्रेलियमा रहेका नेपालीहरु पनि सो को संक्रमणमा पर्ने खतरा बढेको छ । त्यहा रहेका नेपालीको अबस्था कस्तो छ । त्यहाँको सरकारले के कस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ, भन्ने बिषयमा बिपत व्यवस्थापन तथा आमसंञ्चार व्यवस्थापनको बिषयमा अनुसन्धान कर्ताको रुपमा रहनुभएका भरतराज पौडेल संग गरिएको कुराकानी ।
हिमालय कङ्गारो अनलाइन ः अहिले अष्ट्रेलियाको अबस्था कस्तो छ ?
कोरोना भाईरसको त्रास रहेको छ । अहिले सम्म अष्ट्रेलियामा त्यस्तो ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छैन । समस्या समाधानका लागि यहाँको सरकार लागि परेको छ । अहिले सम्म नियन्त्रणमानै रहेको छ । यसरीनै अघि वढेमा खतरा नहुने देखिन्छ ।
हिमालय कङ्गारो अनलाइन ः यसका लागि कस्तो उपाय अपनाएको छ ?
यो भाईरसको नेचजलाई रोक्ने भनेको मान्छेको आवतजावत रोक्ने हो । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जाने मानिसको आबतजावतमा रोक लगाएको छ । अहिले १० जना भन्दा वढि भेला हुन नपाउने निर्णय गरेको छ । सपिङ् महल देखि हरेक स्थान र शहरमा सामाजिक दुरी कायम गरिएको छ । बाहिर हिड्दा दुई जना मात्र हिड्न दिने, भेला हुने । भोजभतेर गर्न नदिने लगाएतका कामका लागि यहाँका सुरक्षा निकायहरु क्रियाशिल रहेका छन् । अहिले कडाईका साथ काम गरिएको छ ।
अहिले सरकारले घरमानै बसेर काम गर्नका लागि सर्बसाधारणहरुलाई आग्रह गरिरहेको छ । सरकारको आग्र्रह अनुसार काम भईरहेको छ । सामान्य अबस्थामा अस्पताल नजाने, चिकित्सकहरु संग फोनमा सम्पर्क गरेर सेवा लिने जस्ता कामहरु गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।
हिमालय कङ्गारो अनलाइन ः अहिलेको तथ्याङ्क के छ ?
अहिले यहाँ ५ हजार ६ सय ३४ जनाको परिक्षण गरिएको छ । १ लाखमा १ हजार २ सय जनाको अनुपातमा परिक्षण गर्ने गरिएको छ । संक्रमितको आधारमा ३४ जनाको मृत्यु भएकको छ । ८५ जना अस्पतालमा छन् । घर फराकीलो स्थानमा रहेको छ । पार्कहरु पनि फराकीला रहेका छन् । भिडभाड कम हुने भएकाले राम्रो छ । अस्पतालका २५ सय आईसियु वेडहरु रहेका छन् । अहिले पाँच हजार पुर्याउने लक्ष्यमा अष्ट्रेलिया रहेको छ । एउटै घरमा धेरै वसेका ठाउँमा जोखिम हुने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाईएको छ । अहिले ५ सय हाराहारी आईसियुमा रहेका छन् ।
हिमालय कङ्गारो अनलाइन ःसंक्रमितको संख्या लुकाएको हो ?
संक्रमितको संख्या लुकाएको भन्ने गलत हो । हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने गरिएको छ । अहिले कर्मचारीहरुलाई घरमानै बसेर काम गरेर बस्नका लागि ६ महिनाको लागि तलव खातामा हालेर घरमानै बस्ने अबस्था छ । हरेक प्रदेश सरकार र हरेक स्वास्थ्य संस्थाले दिनहुँ जसो स्वास्थ्य परिक्षण र अहिलेको अबस्थाका बारेमा जानकारी गराउने गरेका छन् । सरकारले पनि बिभिन्न घोषणाहरु ग्रिरहेको छ ।
हिमालय कङ्गारो अनलाइन ः छिमेकी देशको अबस्था कस्तो छ ?
यहाँका छिमेकी देशहरुमा त्यस्तो ठूलो खतरा देखिएको छैन । संक्रमण हुन सक्ने भन्दै बिभिन्न देशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरु ल्याउने क्रम जारी रहेको छ । सो क्रममा बाहीरबाट आएकाहरुमा संक्रण देखिएको भए पनि आन्तरीक रुपमा देखिएको छैन । जसका कारण यसलाई रोक्न सरकार लागि परेको छ । जहाँ सम्म छिमेकी देशको कुरा छ । अष्ट्रेलियाले आफ्ना छिमेकी देशहरुलाई सहयोग समेत गर्दै आएको छ ।
हिमालय कङ्गारो अनलाइन ः नेपालीका अबस्था कस्तो छ ?
संक्रमणको संख्या वढ््दो मात्रामा रहे पनि अहिले सम्म नेपालीमा त्यो समस्या देखिएको छैन । सरकारले पनि ६ महिनाका लागि आफ्नो व्यवस्थापन गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसारको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । राजदुताबासबाट पनि सहयोग हुने क्रम रहेको छ ।
समय र संबादको लागि धन्यबाद ,हामी निरन्तर अपडेटमा रहनेछौं ।।
Previousनेपालमा विदेशबाट आएकाबाटै उच्च जोखिम
Nextलकडाउन बैशाख ३ सम्म थप्ने सरकारको निर्णय
सबैलाई हैरान पार्ने अमेरिकाका यी नियम
३० असार २०७५, शनिबार ०५:४२
३ मंसिर २०७४, आईतवार १०:३०
कविता : भानुजयन्ती उस्तै !
३ श्रावण २०७२, आईतवार ०१:५४